स्वास्थ्य समाचार अपडेट - Page 20 of 106 - Koshi Online
गायिका साहिमा श्रेष्ठले दिइन् सेलेव ब्युटीका १० पर्मुला
१९ श्रावण २०७४, बिहीबार ०६:३४
साहिमा श्रेष्ठ, हाल चर्चामा रहेकी गायिका हुन् । ‘तिम्रो डोला डोला हातमा मेहदी भरिछौ’ बोलको गीतले साहिमालाई चर्चामा तानिदिएको थियो । हुन त उनका हरेक गीत दर्शक/श्रोताको रोजाइमा परेका छन् । उनी सौन्दर्यमा उत्तिकै सचेत छिन् । यस्तो रहेछ…
आफ्नो कपाल कसरी जोगाउने ? यस्ता छन् घरायसी रूपमै कपाल जोगाउने उपाय
१९ श्रावण २०७४, बिहीबार ०६:२९
कपाल नरम र चम्किलो बनाउने रहर सबैको हुन्छ । खासगरी युवतीको कपाल लामो हुने भएकाले केयर बढी आवश्यक पर्छ । तर, रहर भएर पनि ज्ञान नहुँदा रहरमै चित्त बुझाउनुको विकल्प हुँदैन । नरम र चम्किलो कपाल बनाउन केही उपाय अपनाउन सकिन्छ: हप्तामा दुई–तीनपटक…
१९ श्रावण २०७४, बिहीबार ०६:२५
भान्सामा मसलाको रूपमा प्रयोग हुने लसुनमा औषधीय गुण पनि हुन्छ । आयुर्वेदमा मात्र नभएर प्याथोलोजी विशेषज्ञहरू पनि यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दा धेरै फाइदा हुनेमा विश्वास गर्छन् । त्यही भएर कतिपय चिकित्सकले बिरामीलाई सन्तुलित भोजनबारे…
तपाईंलाई राति सुत्न गाह्रो पर्छ ? मिठो निद्रा लिन सक्नुहुन्न ? अब यसो गर्नुस्
१८ श्रावण २०७४, बुधबार २३:१४
मधुमेह अनिद्राका कारणले कर्टिसोल हर्माेनको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । यो हर्माेनले शरीरमा चिनीको मात्रा बढाउँछ र निरन्तर बढ्दै गएमा मधुमेहको जोखिम निम्तिन्छ । मुटुरोग अनिद्राका कारणले उच्च रक्तचापको समस्या पनि देखिने गर्छ । यो समस्या निरन्तर…
अध्ययन भन्छ– उमेरभन्दा ७ वर्ष जवान बन्न सेक्स निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ
१८ श्रावण २०७४, बुधबार २१:५६
एजेन्सी, साउन १८ के तपाईं नियमित सेक्स गर्नुहुन्छ ? यदि गर्नुहुन्न भने एकपटक सोच्नैपर्छ । सेक्सले मानिसलाई जवान रहन मदत गर्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । डाक्टर वीकले गरेको १० वर्षको अनुसन्धान तथा अध्ययनबाट के पत्ता लागेको छ भने, जोडीको यौन…
के तपाईंलाई करेला मन पर्दैन ? यो पढेपछि अवश्य पनि करेला खान थाल्नुहुन्छ
१८ श्रावण २०७४, बुधबार १४:२७
विराटनगर, साउन १८ सामान्तयः कतिपय मानिसलाई करेला मन पर्दैन । तितो हुने हुँदा यो सबैको रोजाइमा पर्दैन । त्यसो त कतिपयले करेला रुचिपूर्वक खान्छन् । हामीकहाँ करेला तरकारी साथै अचारका रूपमा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । करेलामा भिटामिन ‘ए’,…
यसरी गरौं दाँतको स्याहार
१८ श्रावण २०७४, बुधबार ०८:२०
विराटनगर, साउन १७ आजभोलि सानो उमेरदेखि वयस्क उमेरका जोसुकैमा पनि दाँतसम्बन्धी समस्या देखिन थालेको छ । दाँतले हाम्रो शरीरको सौन्दर्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । दाँत स्वस्थ नहुनु भनेको हाम्रो शरीर पनि अस्वस्थ हुनु हो । सानो…
यसरी बढाउन सकिन्छ पाचन क्षमता
१७ श्रावण २०७४, मंगलवार १५:०३
विराटनगर, साउन १७ हामी जे–जति खानेकुरा खान्छौँ, त्यसबाट शरीरमा ऊर्जा मिल्छ । यसरी खानालाई ऊर्जामा बदल्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई मोटाबोलिज्म भनिन्छ । व्यक्तिको स्वास्थ्यअनुसार मोटाबोलिज्म क्षमता कसैमा बढी र कसैमा कम हुन सक्छ । यदि…
स्मरण शक्ति बढाउन चाहनुहुन्छ ? योग गर्नुहोस्, यस्ता छन् योग गर्ने तरिका
१७ श्रावण २०७४, मंगलवार १४:५९
विराटनगर, साउन १७ पछिल्लो समयमा बालकदेखि वृद्धसम्मका मानिसले धेरै लामो समय पनि सम्झन नसकेको गुनासो गरिरहन्छन् । सबैलाई थाहै छ, स्मरण शक्ति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । खासगरी विद्यार्थी स्मरण एकाग्रता नहुँदा चिन्तित बनिरहन्छन् । स्मरण शक्तिलाई…
यस्ता छन् दिनहुँ काँक्रा खानु फाइदाहरू
१७ श्रावण २०७४, मंगलवार १४:१५
विराटनर, साउन १७ स्वास्थ्यका लागि काँक्रा अत्यन्तै लाभदायक मानिन्छ । काँक्रामा पाइने भिटामिन ‘बी’का कारण शरीरलाई तत्काल ऊर्जा दिन्छ । र, यसले डिहाइड्रेसनबाट बचाउँछ । शरीरमा बन्ने खराब विकारलाई शरीरबाट बाहिर जान पनि सहयोग गर्छ । यसले शरीरमा…